Namoonni Sidaamaarraa buqqa'an godina Gujii, Booree qubatan - BBC News Afaan Oromoo
Namoonni Sidaamaarraa buqqa'an godina Gujii, Booree qubatan
Rakkoo nageenyaa Adoolessa 12 godina Sidaamaa bakka gara garaatti uumameen walqabatee manneen amantaa gubachuufi namoonni sabummaa isaaniif qe'eefi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuun himameera.
Bataskaanni Ortodoksii naannawaa Hagare Selaam jiran sadii guutummaan guutuutti gubachuufi sadii kan biroon ammoo saamamuufi meeshaaleen amantaa keessa jiran gubachuu Hoji-gaggeessaan Sidaamaa Geede'oo Hagare Sibkat Meggaabe Xibabaat Mollaaliny Margiyaa BBC'tti himaniiru.
Bataskaanonni guutummaan guutuutti manca'an Dooyyaa Quddus Mikaa'el, Geetamaa Gabre Kiristoosiifi Ciroonii Quddus Amaanu'eel akka ta'e dubbatu.
Bataskaanonni gubatan Jimaata A L I 12/11/2011 yommuu ta'u Bataskaana Kidaane Mihirat kan saamame ammoo Sanbata gaafa 13/11/2011 ta'uu ibsu.
Akka Qees Mollaalinyitti tajaajiltoonni akka reebaman ragaa akka qaban himanii namoonni miidhaa kana geessisan ammoo dargaggoota gurmaa'anidha jedhan.
Kana malees, rakkoo uumame kanaan walqabatee saboonni biroo godinicha keessa jiraatanis manni isaanii jalaa gubatee kan qabeenyi isaanii jalaa saamames himachaa jir.Godinuma Sidaamaatti dhalatanii maatiis achumatti horachuu kan himan Obbo Tinsaayee Baayew, godina Sidaamaa magaalaa Yirgaalam irraa Adoolessa 12 sabummaadhaan buqqaane jedhu.
Saboota biroo qe'ee isaaniirraa buqqisuun kan eegalame Adoolessa 11 gara galgalaa ta'uu kan himan Obbo Tinsaa'een, badiin guddaan kan gahe magaala caalaa baadiyyaatti jedhu.
"Gara magaalaatti mana gubna yoo jedhan warri kaan 'dhiisaa hin gubinaa yeroo isaan deeman keessa jiraanna jechaa turan. Baadiyyaatti garuu manneen gubaniiru, beelladoota saamaniiru kaan duulan qalatanii nyaataniiru," jedhan.
Namoonni gocha saba biraa adda baasanii buqqisuu kana raawwatan uummata Sidaamaa jaalalaan waliin jiraachaa turre bakka hin bu'anis jedhu Obbo Tinsaa'een. Namoonni gareedhaan namoota buqqisaa turan kunneen dhaadannoofi sirba ergaa " manni warra gara biraatii dhufanii ona haa ta'u' jedhu ofkeessaa qabu sirbaa akka turanis yaadatu. Hawaasni sababa sabummaatiin aanaa Hagare Selaamiifi magaala Yirgaalem keessaa buqqa'an kunneen yeroo ammaa Oromiyaa godina Gujii aanaa Booreetti galma mana amantaa keessatti qubatanii jiru.
Lakkoofsi namoota dhufanii dabalaa dhufuusaatiin dahoo manneen awwaalchaa keessas qubachaa jiraachuu himu.
Obbo Tesfaayee Baayew, ammoo nutu hubachuu dhabee hanga nu miidhanitti eege malee jarri dursanii nutti himaa turanii jedhu.
"Ji'a tokko dura 'Adoolessa 11, Adoolessa 11,' jechaa nutti dhaadachaa turan. Guyyicha isaan edaa warra saba biraa ta'e buqqisuuf yaadaniiti. Nuti isuma naannoo argachuu sana jenneet callisne," jedhu. Manneen amantaafi namoonni saba biraa ta'an Sidaamaaf naannoon akka hin kennamneef birrii walitti qabdanii warra mootummaatiif kennitaniittu olola jedhu odeessuutu eegalames jedhu.
"Nuti waan akkanaatiif maallaqa walitti buusne hin qabnu jennullee, dhimmichi hanga bulchiinsa aanaatti gahee dhalattoonni Sidaamaa qofti walgahii cufaadhaan dhimmicharatti mari'atamaa ture.
Booda sodaannee aanaa gaafannaan hinsodaatinaa poolisii ramadnee isin eegna nuun jedhanii abdii nu kennanii ture," jedhu Obbo Tesfaayeen. Gocha saba biraa adda baasanii buqqisuu Adoolessa 12 tahe kana gartuu mootummaas harka keessaa qabachuu akka hin oolles himu.
Gaafa xiyyefannaan kuni sabaratti miti jechuu barbaadan nuti namoota saamicha gaggeessan kanayyuu hin beeknu jedhu jedhu Obbo Tasfaayeen.
Jiraattuu magaala Yirgaalem ta'uufi amma buqqifamanii magaala Boooree qubatanii kan jiran Aadde Itaabezuu Kaasayees Adoolessa 12 galgala gareen gurmaa'e mana isaanii gubee maatii isaanii waliin baqachuu himu. Erga qe'ee isaaniitii buqqa'anii maatii isaanii keessaa ijoolleen isaanii sadii waldhabanii hanga ammaa eessa akka jiran akka hin beeknes yaaddoo cimaadhaan BBCtti himan. Sidaamaa keessa waggoota 20 oliif jiraachuu kan himan aadde Itaabezzuun, saba sidaamaa waliin jaalalaan jiraachaa turuufi ijoollee durbaa isaaniillee warra sidaamaatti heerumanii jiraachuu eeran.
Mootummaan jireenya keenyaaf wabii nuuf kennee qe'ee keenyatti nu deebisu barbaannas jedhu namoonni kunneen.
Itti-gaafatamaan waajjira bulchiinsaafi nageenyaa aanaa Booree Obbo Xilahun Taaffasaa, guyyoota afran darbe namoonni Sidaamaarraa buqqa'an 457 aanicha qubatanii jiraachuu himan.
"Namoonni baayyeen kan ragaa kana keessatti hin dabalamin firoota bira magaala keessa warri jiran hin lakkaa hamne.
Kana malees amma gandoota aanaa keenyaa ollaa Sidaamaa jiranirraa gara keenyatti dhufaa akka jiran odeefannoo argachaa jirra," jedhan.
Buqqaatonni kunneen bakka qubatanii jiran mana amantaa magaalichatti argamutti humnaa ol waan ta'eefis hanqinni bakka qulqullinaa mul'achaa jiru. Dhibeewwan daddarboo birootiif sababa ta'uu akka malus yaaddoo qaban ibsan. Lakkoofsi buqqaatotaa gara aanichaa dhufaa jiran daran dabalaa waan jiruuf humna aanichaati olta'uus himan.
Aanga'aan Booree kun akka jedhanitti tajaajila fayyaan mootummaan gargaarsa dhiyeessaa kan jiru yommuu ta'u nyaataafi uffataan ummata magalattiitu birmateef.
Warreen buqqa'anis erga Booree ga'anii garagaarsi argachaa jiran gaarii ta'uufi ummata magaalaas ni galateefatu jedhan.
Gaaffii Sidaamaa: Hokkarri Hawaasaatti eegale iddowwan biraatti miidhaa qaqqabsiise
19 Adooleessa 2019